Peninsula YaseCrimea ubizwa wageza ngu ezilwandle ezimbili: enyakatho-mpumalanga - Azov, eningizimu nasentshonalanga - Black. Kuze 2014 lwekuphatfwa ngalokuyimphumelelo kungokwalabo Ukraine, manje ensimini Russian Federation. Ogwini, inhlonhlo ye-kuyinto nemizana engaphezu kwengu-40, okuyinto athandwa resort izindawo. Enye yalezi kungenziwa ngokuthi isiphetho Cliff (eCrimea). Izibuyekezo mayelana nohlelo, ingqalasizinda, lolwandle libanakekele ekhethekile, ngakho-ke lokhu bakutshele kamuva ngaphezulu. Okwamanje, ake ufunde kabanzi mayelana nokukhokha komnikazi.
Leli dolobhana kuyinto Bluff: incazelo
Lokhu edolobheni isendaweni oluseningizimu ye-eCrimea. Le ndawo, inhlonhlo ye-ithandwa kakhulu resort endaweni. Leli dolobhana ngokwayo lincane kakhulu. endaweni yayo awufiki ngisho 1 sq. km. Ngaphambili, yena waba amanye amagama - Kuchuk Lambath, Karasan, futhi kuze kube ngo-1968 - Cosy. Uyalalela Alushta City Council. Leli dolobhana kuyinto Bluff (eCrimea) owakhiwe abantu 264 kuphela (idatha ye 2014). Kulaba, 80% - Russian. eyingqopha Local angabhekwa kwaleli chibi, uphahlwe enezisekelo zikakhonkolo. Lapha, ehlobo eziningi izivakashi ukuhamba, futhi lendawo wamisa amatende nge eziyisikhumbuzo. amaholide abaningi bavakashela ipaki, obadalwa ku 1813-1814 biennium. endaweni yaso cishe 8 amahektha. Kusukela ngekhulu XIX, kuba evikelwe lesikhumbuzo yezakhiwo.
Utes emzaneni (eCrimea), isithombe ongawabona esihlokweni eba kuphela emkhakheni wezokuvakasha. It ikhona amakhilomitha ayishumi nje kusukela Alushta, okuvumela izivakashi kalula ufika izindawo ezikhethiwe. Abantu bendawo uthole kuphela isizini ukugeza, ngalesi sikhathi abaningi kakhulu izivakashi lapha. Edolobhaneni Yakhiwa eziningi amahhotela ukuthi bayajabula yokwamukela izivakashi.
Phumula edolobhaneni Rock is zihlukaniswa ngendlela yayo ezolile nenokuthula. Emoyeni lapha uhlanzekile, nezagazovanny. Amanzi nendlu yaqala ukufudumala kahle. Kukhona amabhishi khulula. Basuke ifakwe deckchairs nezambulela, kodwa izindawo kwaqashwa imali.
Leli dolobhana kuyinto Bluff (eCrimea) bayokwazisa ezihlukahlukene amabhishi izivakashi. Kukhona itshe, itshe (zasendle) endaweni kanye zinsika. Lesi sakamuva akuzona bemthanda izivakashi, kodwa kusekuningi imibhede lula ilanga. amabhishi Wild ngokuvamile ukuhlela sicu photo emadwaleni. Izithombe kukhona okumnandi. Esibhedlela "eweni" kuyinto lolwandle zinakho. Lapha, linikeza konke okudingayo ukuhlala ukhululekile - Cabanas, lounge izihlalo, ilanga izambulela. Futhi phezu kwaleli chibi "Karasan" kuyinto lolwandle ukhonkolo, kukhona yangasese.
Point of isithakazelo ngesimo amawa ngasolwandle, ngokuthi "The Three Sisters ne-monk" itholakala eduze kwaleli chibi (cishe ngo-50 metres). Le ndawo enhle izivakashi asebenzayo abenza diving kanye Spearfishing. Ukuze ukulandelana slipways eyakhelwe bebheke Alushta, ebhishi ngamathayi nasemigedeni encane.
izihambi eziningi Bluff (eCrimea) emzaneni ekhethiwe akulona okokuqala kuze kube iholidi ngaphambi ehlobo, gubha inqwaba amahhotela ukuthi abe isigaba ezahlukene intengo. Futhi kulabo abafuna ulondoloze imali yokuhlala, izakhamuzi zendawo ukuqasha amakamelo. Ukuze kwesabelomali kanye nokungcebeleka kukhona - usuku izobiza ruble mayelana 500, ngisho kancane uma ehhotela izobiza ruble 800 kuya kwezingu-3000 ... nangaphezulu. Amanani zincike esimweni esinikeziwe.
Iziphi ezinye izinzuzo emzaneni eweni (eCrimea)? Izibuyekezo zezivakashi avunyelwe ukuba amphuzise uhlu oluthile:
izinto ezahlukene ongazikhetha ukuhlola endaweni enhle nehlanzekile;
endaweni ethule ngaphandle befuna evamile komuzi.
Kodwa ukuthi akamthandi ngempela like izivakashi, ngakho-ke ezinye ngokuphazamisa ebhishi yangasese ngokhonkolo - phansi lapha kungenziwa kuphela usebenzisa izitebhisi.
Leli dolobhana kuyinto Bluff (eCrimea) Amahhotela
Kulabo abafuna ukuvakashela leyo ndawo okokuqala. Cliff belulekwa ukufunda amahhotela ethandwa kakhulu:
Ihhotela "Santa Barbara." Itholakala ngqo ogwini. Lesi sakhiwo imele ukuze izivakashi ezivela amafasitela ungabukela emadlambini. Ingabe lolwandle ayo ifakwe, balcony ethokomele lapho efakwe nezihlalo itiye amatafula. Siqukethe izakhiwo ezine: villa main futhi "Uhambo" itholakala amamitha eziyisishiyagalombili kuphela olwandle, i- "Zenzele Igama" - 200 m olukude kakhulu, kodwa akukho esikhangayo kancane esimweni sesibili .. Yakhiwa at ibanga 350 m.
Ihhotela "Seventh Heaven" kuhlobisa le ndawo eweni (eCrimea). Itholakala ogwini Black Sea. Igumbi amazinga - ruble mayelana 2000. ne kwasekuseni. Izingane ezingaphansi kweminyaka eyisithupha ubudala uhlale mahhala. Insimu has a lot yokupaka. Amakamelo ziyizincwadi ezinhle kakhulu yesimanje ingaphakathi, air-conditioning futhi amafriji. Abasebenzi hhotela friendly futhi ukufanelekela kahle.
Ihhotela "Fortuna" itholakala Awukude ifa Princess gagarina (mayelana 100 m). Indawo lapha ayibizi. Mahhala lolwandle okuwuhambo lwemizuzu engu-5 kusukela eziyinkimbinkimbi. Ngakolunye uhlangothi, izivakashi buka landscape entabeni ngakolunye - isikhala ulwandle.
I-plug in the endlebeni: izimpawu, izindlela zokusuka
Amahhotela eshibhile eMoscow. yokuhlala eshibhile emahhotela eMoscow
Kungani ngidinga izibuko computer, futhi kanjani ukukhetha ilungelo?